लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पार्ने को ? – eSajha News
लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पार्ने को ?
प्रकाशित मिति: १९ पुष २०७७, आईतवार ११:०२
विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख समाचारका पात्र बनिरहेका बहुचर्चित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षहरूबीचको सत्ता रडाको किनारा लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।दुईतिहाई बहुमतको नेकपा सरकार पार्टी विभाजनको बाध्यतामा पुग्छन् भन्ने कसैले पनि सायदै सोचेका थिएनन् होला । आज सत्तासिन नेकपा कोहि कुर्सी बचाउन लागिपरेका छन् भने कोहि कुर्सीको लोभमा पछि परेका छन् । कुर्सीको पछि दौडिने नेताहरू जनताका हकहितका लागि कहिले दौडिने हुन् ?
पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफ्नो समर्थनमा कार्यकर्ताहरु उभ्याउन खोज्दै छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेका कारण पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको ओलीले लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा परेकोले नयाँ जनादेशको लागि सिफारिश गर्नुपरेको बताइरहदा खतरा पार्ने को ? भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । संसद विघटन गरेका प्रम ओलीले संसद पुनःस्थापना कुनैपनि हालतमा नहुने समेत भन्दै आइरहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ लाई आधार मानेर गरिएको भनिएको विघटन कुनै पनि किसिमले पुष्टि हुँदैन । सो धारामा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा, दुई दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा र संसद्को सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान वर्तमान संविधानमा छ ।
यसबाहेक यो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कतै, कुनै दफा, धारा र परिच्छेदमा कल्पना गरेको छैन ।
जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई नै काम गर्न नदिएर कुर्सी बचाउने खेलमा संसद विघटन जस्तो कठोर कदम चालेर प्रम ओली आफैले लोकतन्त्र विरुद्ध जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेका छन् । संसद विघटन कसको लागि जरुरी थियो र ? तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनोमानी गरेर संसद विघटनको कदम चालेर आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन अंहकारको रूपमा देखाए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीहरु चुनावको लागि तयारी गरिरहेको र सुरक्षा निकायले चुनावको तयारी गरिरहेको समेत बताइरहेका छन् । खर्चिलो निर्वाचनबाट बल्लतल्ल पाएको स्थायी सरकार प्रधानमन्त्री आफैले अस्थिरतातर्फ धकेलेर जनतालाई लोकतन्त्र र संविधानको दुहाई दिइरहेका छन् । देशलाई माया गर्ने शक्तिलाई जनताले मत दिने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री जनताको मतको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कुर्सी बचाउ अभियानमा लागेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध दिनदिनै प्रदर्शन भैरहेका छन् । यसकै विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह पनि `हामी यता छौं´ भन्दै आफुहरुलाई देखाउदै छन् । सत्ता शक्तिको प्रयोगले नेकपा विभाजन त भयो नेकपा विभाजनसंगै कार्यकर्ता पनि विभाजन हुँदै गैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ सहन नसक्ने सडकमा आन्दोलनरत छन् भने समर्थन गर्ने ओलीको सत्तामा छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद,मतभेद र अन्तरकलहले पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता समेत अलमल्लमा परेका छन् ।
पार्टी विभाजनको भुमरीमा परेका नेकपा नेता कार्यकर्ता सबै अहिले कुर्सी मोह राख्ने प्रचण्ड सहि हुन् या कुर्सी जोगाउन खोज्ने ओली सहि हुन् भन्ने दुविधामा परेका छन् । ओली समर्थनका नेता प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहासिक कदम भनेर प्रशंसा गर्दैछन् भने कसैले प्रधानमन्त्री विदेशीको इशारामा चलेको कठपुतलीको संज्ञा दिइरहेका छन् । यसरी अध्यक्ष एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै जनताको मतको दुरुपयोग गर्दैछन् । नेताहरुको यस्तो हर्कत र प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अंहकारी दम्भ भन्दा त राजसंस्था नै ठिक थियो भन्ने जनताहरुले पछिल्लो समय महसुस गर्दै आइरहेका छन् ।
विभाजित नेकपाको सत्ता मोह देखेर जनतामा निराशा छाएको छ । २०६२/६३ मा राजसंस्था फालेर गल्ती पो गरिएछ कि भनेर अब जनताले सोच्ने बेला आएको छ । जनताको आशा र विश्वासमा कुठाराघात हुँदै गर्दा जनताको सत्ताप्रति निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । जनताको विश्वास र मतको दुरुपयोग हुँदै गैरहे जसरी जनताले राजसंस्था फालेका थिए, त्यसरी नै जनताले यो कुर्सी मोहमा लागेका सत्तासिन नेकपालाई पनि फाल्ने बेर छैन । साझा न्यूज साप्ताहिकबाट
१९ पुष २०७७, आईतवार ११:०२ मा प्रकाशित